Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny saobaky ny mpampivelona (Alytes obstetricans)
firosoana >> toetra >> Paladia mpampivelona (mpitsabo aretin-tsaina Alytes)
Lakile Amphibiana an'ny zaridaina natiora any Espanamarary mitsika
Ary ireto misy fanamarihana vitsivitsy momba ny zavatra hitako momba ny saobaky ny mpampivelona.
Izany dia saobakaka kely, latsaky ny 5 cm. Miaraka amin'ny androm-piainan'ny 5 taona izay kely dia kely raha jerena ny saobakaka mahazatra (Bufo bufo) afaka miaina hatramin'ny 30 taona.
Maso amam-baravarana, miaraka amin'ny mpianatra volamena sy mpianatra mitsangana. Fisehoana mangatsiaka, hoditra grainy misy vilana.
Tsy faritany io, ny lahy dia afaka mizara fialofana ao anaty vatolampy, kitrokely sns.. Ary mifaninana amin'ny fifaninanana izy ireo.
Amin'ity sary ity dia azontsika atao ny mankasitraka tsara ny eyelid fahatelo na membrane nictitating.
Ahoana no amantarana azy
Ny fomba voalohany dia miaraka amin'ny lakilen'ny sisa tavela etsy ambony.
Fomba iray hafa hahafantarana azy ireo ny fihirana. Miavaka tsy manam-paharoa izy io, tsy azo hadinoina, toy ny angady kely avoakan'ny lehilahy, toa vorondolo kely izy io. Hatramin'izao, na dia nihaino azy nandritra ny fahavaratra aza aho dia mbola tsy fantatro hoe biby inona io. Nahavita nandrakitra an'io aho. Afaka mihaino azy eto ianao.
Toerana onenana sy faritra fizarana
Afaka mahita azy amin'ny toerana maro samihafa isika, manomboka amin'ny faritra be tendrombohitra, ala ary renirano ka hatrany amin'ny faritra an-tanàn-dehibe.
Amin'ny firenena samihafa (Soisa, Belzika, Alemana, Fanjakana Mitambatra, Luxembourg, France ary Peninsula Iberia)
Inona no nohanin'izy ireo? sakafo
Toy ny karazana anurans hafa Ny spider, ny arthropods ary ny bibikely kely, ny kankana, ny olitra, ny voangory, ny kankana, ny samoina, Etc.
Tsy biby fiompy izy ireo. Indraindray kosa isika dia mamonjy tadikely amin'ny dobo efa ho maina. Tiako ny hikarakaran'ireo zazavavy azy ireo sy handinihany ny fiovana.
Ny tadpoles na ny olitra dia mihinana zava-maniry sy karaoty hitan'izy ireo ao anaty rano. Raha mila mamahana azy ireo vetivety ianao dia azonao atao amin'ny sakafon'ny trondro.
Rehefa avy ny orana voalohany amin'ny volana septambra ny amplexus (izay fomba fampiraisana amphibians anuran)Izy io dia novokarina an-tanety ary inguinal, miaraka amin'ny fahaizany manokana fa ny lahy no mitondra atody. Ny lahy dia manentana ny vavy hamoaka atody atody iray izay zezika lahy ary miraikitra amin'ny tongony aoriana izay hitondrany azy mandritra ny 1 volana.
Mbola tsy afaka naka sary azy io aho, antenaiko fa afaka maka sary tsara ny amplexus ato ho ato.
Karazana na karazana saobakaka mpampivelona
Misy karazany 5 ny saobaky ny mpampivelona:
Palaka mpampivelona mahazatra (Alytes bevohoka)
Tady mpampivelona Iberianina (Alytes cisternasii)
Mpampivelona Balearika na koditra ferreret (Alytes muletensis)
Toaka mpampivelona Betika (Alytes dickhilleni)
Toad mpampivelona Maghreb (maire Alytes)
Ny 4 voalohany dia hita any Espana sy Valencia, ny zaza saosy mpampivelona mahazatra ihany no misy. Ka tsy misy fisavoritahana eo amin'ny karazana rehefa mahita iray isika.
Ary amin'ny ririnina?
Matetika aho no nanontany tena hoe inona no ataon'ny sahona sy saobakaka amin'ny ririnina.
Eny, saobakaka sy anurans bruman. Ny brumation dia karazana hibernation an'ny amphibians sy ny biby mandady. Avela ho marefo ao ambanin'ny rano izy ireo, na dia tsy maintsy manohy mihinana sy misotro aza indraindray. Mamela antsipiriany bebe kokoa momba ny hibernation sy ny brumation amin'ity lahatsoratra ity aho.
Sokajy toetra Ticket navigation
2 Ahoana no amantarana azy
3 Toerana onenana sy faritra fizarana
4 Inona no nohanin'izy ireo? sakafo
5 Ny amplexus
6 Karazana na karazana saobakaka mpampivelona
7 Ary amin'ny ririnina?
8 Loharano sy loharano